Yamuna Online Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း: 1-8-2013 New clinic assistant boys
1-8-2013 New clinic assistant boys
Mang Pi (Zomi) and Robin (Kuki/Naga) work as new clinic assistants since two weeks ago. They are 67th and 68th volunteers of Yamuna Clinic. All clinic volunteers are of different ethnic nationalities.
မန်းပီး (ဇိုမီး) နှင့် ရော်ဘင် (ကူကီး-နာဂ) တို့သည် လွန်ခဲ့သည့် ၂ ပါတ်မှစပြီး ယမုန်နာဆေးခန်းသို့ လာရောက်ကူညီကြသည်။ ၄င်းတို့မှာ နံပါတ် ၆၇ နှင့် ၆၈ ယောက်မြောက် ကူညီသူများဖြစ်ကြသည်။ ဆေးခန်းအကူများသည် ချင်းလူမျိုးစု (ဖလမ်း၊ ဇိုမီး၊ မတူပီ)၊ (ကူကီး-နာဂ) နှင့် မြန်မာတို့ဖြစ်ကြသည်။
Posted by Dr. Tint Swe at 5:37 AM